Igwe ojii: njirimara, ụdị na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
La urukpuru ọ bụ otu n'ime mgbanwe ikuku nke a na-amụrụ ihe kwa ụbọchị. Ọ dị ezigbo mkpa ịmata amụma ihu igwe. Igwe ojii abughi nani mmiri ozuzo na oke mmiri ozuzo, kamakwa inye otutu ihe omuma banyere meteorology nke mpaghara. Taa a maara ya n'ọtụtụ ụzọ iji nwee ike ịkọwa ihu igwe ga-adị na igwe ojii na-arụ ọrụ dị mkpa.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị njirimara niile, ụdị na mkpa nke igwe ojii.
2 Igwe ojii na ikuku
2.1 Igwe ojii
2.2 Igwe ojii
2.3 Igwe ojii
3 Mkpa nke igwe ojii
Igwe ojii bụ mkpokọ mmiri nke alụlụ mmiri na-akpụ site na ikuku ikuku. Mmalite nke igwe ojii na-amalite site n’ọrụ nke anyanwụ na ụzarị ọkụ na mbara igwe anyị. Mgbe anwụ na-acha n’elu ụwa, ikuku na-agba ya gburugburu. Mgbe ikuku malitere ịbawanye ogo ya na-adịwanye ntakịrị, n'ihi ya ọ na-ebili ma dochie ikuku dị jụụ na elu. N’aka ozo, n’elu uwa, ikuku oyi nwere ike dochie ikuku di elu nke biliri. Ka elu ikuku na-arị elu na-aba ụba, ọ na-ezute oyi oyi nke na-eme ka ọ malite iwelata okpomọkụ ya.
Ya mere, mgbe ọ rutere oyi oyi nke ikuku, ọnọdụ okpomọkụ ya na-ebelata ọ na-emecha gbadata ghọọ vapo mmiri. Anaghị ahụli alụlụ mmiri ma na-adịgide adịgide na mbara igwe kpamkpam. Otú ọ dị, ebe ọ bụ mmiri mepere nnọọ ada na mmiri kpụkọrọ akpụkọ mejupụtara ha, ha na-enwe ike ịnọ n’ikuku site n’igwe iyi na-adịghị ike. Obere ikuku ikuku nke zuru oke iji dobe mmiri nke mmiri na akpụrụ na ikuku.
Ihe dị iche dị n'etiti usoro nke ụdị ígwé ojii dị iche iche bụ n'ihi ọ̀tụ̀tụ̀ ikuku nke ikuku nke si n’elu ala na-eliwe ụra. E nwere igwe ojii na-etolite na obere okpomọkụ na ndị ọzọ na ndị dị elu. Na-eme ka ọnọdụ kpụ ọkụ n’ọnụ belata, igwe ojii ga-adịwanye njọ. Dabere n'ụdị igwe ojii na ọnọdụ ikuku, otu ụdị ma ọ bụ ọzọ ụdị ọdịda.
Igwe ojii na ikuku
Ọ bụrụ na ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ nke ikuku na-efebata dị ala, ígwé ojii ahụ nke mejupụtara bụ kristal ice. Ihe ọzọ na - emetụta igwe ojii bụ ikuku. Igwe ojii na-kere mgbe ikuku na-ezu ike na-egosi na n'ígwé ma ọ bụ strata. N'aka nke ọzọ, ndị nke a kpụrụ n'etiti ikuku ma ọ bụ ikuku nke nwere ebili mmiri siri ike na-eweta ọkaibe dị elu. Ọ na-abụkarị nke ikpeazụ na-akpata mmiri ozuzo na oké ifufe.
Ka anyị hụ ihe dị iche iche nke ígwé ojii dị ka e guzobere ha:
Ha bụ igwe ojii ndị ahụ na-etolite na elu elu ma ha niile na-ebu amụma ihe na ihu igwe. Ka anyị lee ihe bụ njirimara nke igwe ojii dị elu:
Cirrus: Ha bụ igwe ojii na-acha ọcha, uzo ma na-enweghị onyinyo n'ime. Ha puta dika “horsetails” a ma ama. Ha abụghị ihe ọzọ karịa igwe ojii nke kristal kpụrụ site na ịdị elu nke ha. Ha dị ka filaments ndị pere mpe nke nwere nkesa karịa ma ọ bụ karịa na usoro nke usoro ndị ọzọ. Enwere ike iji anya gbapụ na-ele anya na mbara igwe ma hụ ka ọ dị ka agbachapụrụ ihu igwe na ahịhịa ahịhịa. Ọ bụrụ na igwe ojii gbara gburugburu na mbara igwe niile, ọ ga-abụ na n'oge na-esote elekere 24 na-agbanwe oke ihu igwe ga-enweta. Ke ofụri ofụri, ha na-abụkarị mgbanwe nke mbelata na okpomọkụ.
Akwukwo: Igwe ojii a na-etolite ikuku nke na-aga n'ihu nke na-egosi dị ka ihu ala. Na mgbakwunye, o nwere ụdị dị iche iche dịka ha bụ obere flakes owu. Igwe ojii na-acha ọcha kpamkpam n’enweghị onyinyo ọ bụla. Mgbe elu igwe gosipụtara kpuchie ụdị igwe ojii a, a na-asị na ọ na-agwụ ike. O yikwara ka ùzù aturu. Typesdị igwe ojii ndị a na-egosi na ihu igwe ga-agbanwe n'ihe dịka elekere 12 ma ọ bụrụ na ha apụta n'akụkụ igwe ojii cirrus ahụ. Ha anaghị egosi mgbanwe oge a.
Nsogbu: Ha yiri ka ha na-ele ya anya nke mbu dika ihe nkpuchi nke o siri ike ịmata ihe ndi ozo. Mgbe ụfọdụ, a pụrụ ịhụ nsọtụ ka ha dị ogologo ma dịkwa obosara. A na-amata ha n'ụzọ dị mfe n'ihi na ha na-eme ka mbara igwe dị gburugburu ma anyanwụ ma ọnwa. Ha na-emekarị igwe ojii cirrus ma na-egosi na ihu igwe na-adịghị mma ma ọ bụ ihu na-ekpo ọkụ na-abịa.
Ka anyị hụ ihe ụdị igwe ojii dị iche iche na-eme na nkezi dị elu:
Altocumulus: Ha bụ igwe ojii dị ka flake na-adịchaghị mma. Igwe ojii a na-eweta flakes na ripple n'akụkụ ha dị ala. Altocumulus na-egosi na ajọọ ihu igwe na-amalite ma ọ bụ mmiri ozuzo ma ọ bụ oké ifufe.
Altostratus: Ha bụ igwe ojii nke ọdịdị ha dị na nke dị mkpa na akwa ndị ọzọ dị egwu. A na-ahụkarị anyanwụ site na igwe ojii a ma ọdịdị ya yiri nke ụfọdụ patches na-adịghị agbanwe agbanwe. Ha na-enye mmiri ozuzo na-adịghị oke mmiri nke mmiri ozuzo na-akpata site na ihu igwe dị ala.
Igwe ojii dị ala dịkarịrị nso na ụwa ma na-eme naanị mgbe mmiri ozuzo na-eme. Ihe kachasị mma bụ na mgbe ihu igwe dị mma, enweghị igwe ojii. Ka anyị lee ihe ha bụ:
Nimbostratus: Ha na - aputa dika ihe na agba oji mgbe nile n’ile di iche na opacity. Ọ bụ n'ihi njupụta dị iche na igwe ojii niile. Ha bụ ihe atụ nke oge opupu ihe ubi na udu mmiri. A pụkwara ịchọta ha na ọdịda n'ụdị snow.
Nkeji: Ha bụ ndị nwere undulations yiri nke elongated cylinders. Ha nwekwara ụfọdụ agba agba na agba ntụ dị iche iche. Ọ bụ obere na ha na-eweta mmiri ozuzo.
Strata: Ha bụ igwe ojii nke nwere ọdịdị nke agba ojii na-enweghị usoro akọwapụtara. Dabere na njupụta nke mpaghara ọ bụla nke igwe ojii ahụ, a pụrụ ịmata ọdịiche dị n'etiti ụfọdụ ihe owuwu nwere oke opacity ma ọ bụ nke pere mpe. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị ala na ọnwa kachasị oyi nke afọ ha bụ igwe ojii nke nwere ike ịnọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị niile ma nyekwuo akụkụ ihu igwe ọnọdụ ihu igwe. Ha bụ ndị protagonists nke ụbọchị igwe ojii na-ahụ n'anya.
Mkpa nke igwe ojii
Igwe ojii bụ ikuku na-agbanwe na mbara igwe amụrụ omimi iji mata ihu igwe nke oge a. Na mgbakwunye, ọ dị ezigbo mkpa maka foto satịlaịtị. Ma ọ bụ na Satellites ndị na-adịghị arụ ọrụ na radieshon infrared nwere nkwarụ mgbe igwe ojii nke mpaghara dị elu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere igwe ojii na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Igwe ojii